Vaovao - Ny toetra mampiavaka ny palitao ambany an'ny vehivavy
Type A profile profile dia miavaka amin'ny palitao sy palitao tsy misy andilana, na tsipika somary andilana ary somary malalaka. Izy io dia afaka manasongadina ny vatan'ny ambony na andilana manify, fa manarona ny kibonao ihany koa, mahatratra ny voka-dratsin'ny fihenan-tsakafo, manafina ny kileman'ny vatana. Tsotra sy mazava ny drafitra ankapobeny. Ny fomba antonony lava karazana A dia misy fiatraikany fizarana vatan'olombelona tsara kokoa, izay afaka manasongadina ny tongotra vavy mahia. Amin'ny ankapobeny, ny akanjo silhouette karazana A dia hamorona vokatra kanto, malefaka ary tanora ho an'ny vehivavy, izay tantaram-pitiavana sy madio kokoa.
Ny mombamomba ny akanjo misy karazana H, fantatra ihany koa amin'ny mombamomba ny boaty, dia miavaka amin'ny alàlan'ny mahitsy miakatra sy midina mba hamorona contour mahitsizoro, manarona ny fiolahana amin'ny tratra, andilana sy andilana, sns. hatsaran-tarehy mavitrika kanto, mahafinaritra sy mahazatra. Ny fitafiana karazana H dia tena lamaody amin'ny ankapobeny. Miaraka amin'ny toetran'ny mahitsy ambony sy ambany, dia mahatonga ny olona ho mahia sy tsara bika izany, ary taratry ny fomba isan-karazany.
Ny mombamomba ny akanjo O-type dia piraofilina malaza izay mafana tato anatin'ny taona vitsivitsy. Aza jerena ny tsipika fehikibo, ny fanitarana ny andilana manasongadina ny maodely soritra, tsy ny tendrony sy ny soroka soroka, manamboatra ny endriny mitovy amin'ny endrika oliva na cocoon silkworm, io no ravina vazivazy ilaina amin'ny ririnina. Hamela ny vehivavy hiseho ho tena toetra, manandrana miavaka; Na mamorona hatsaran-tarehy mahazatra Retro. Ho fanampin'izany, noho ny fiitaran'ny volo ny akanjon'ny cocoon dia afaka miteraka vokatra miafina tsara izy io, noho izany dia somary tsara kokoa ny akanjo cocoon manarona ireo lesoka amin'ny vatan'olombelona.
Ny X dia fitafiana fototra amin'ny ririnina ho an'ny vehivavy lamaody. X dia amin'ny alàlan'ny soroka (ao anatin'izany ny tratra) ny minisitera ary ny hem dia manitatra loatra, mihamafy ny andilana, ka ny endrika ankapobeny dia miakatra sy midina ny maodely kely mihoapampana. Tena manampy tokoa ny manasongadina ny andilan'ny andilan-dehilahy ary ny fomba fiakanjo amin'ny fehikibo dia manasongadina ny fitoviana sy ny firafitry ny vatana, izay mifanaraka amin'ny fihodinan'ny endrik'ilay vehivavy. Ka ny X dia ririnin'ireo tovovavy ary silhouette tadiavina.